Ndị na-emepụta nri ikuku Rayson
N'ịdabere na teknụzụ dị elu, ezigbo ike nrụpụta, na ozi zuru oke, Rayson na-ebute ụzọ ugbu a ma na-agbasa rayon anyị n'ụwa niile. Yana ngwaahịa anyị, a na-enyekwa ọrụ anyị ka ọ bụrụ ọkwa kachasị elu. Oke mmiri nke ikuku nke ikuku taa, Rayson buru elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na nke nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo banyere ngwaahịa ikuku nke ikuku nke ikuku anyị na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ US.Rayson mmiri nke US. A na-enyocha ya n'ihe banyere ịkpa ókè, iwu ụlọ, ihe eji achọ, na ịdị ogologo.